अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले सम्भव हुने काम पनि गर्न सकेन् – दुर्गा नेम्बाङ - Samadarshi Sanchar
समदर्शी संचार, सोमबार, १२ बैशाख, २०७९, बिहानको ०८:०२ बजे
समदर्शी सञ्चार अनलाईन खबरमा तपाईलाई स्वागत छ ।
नमस्कार, समदर्शी सञ्चार अनलाईनका सम्पूर्ण पाठकहरुमा म दुर्गा नेम्बाङको तर्फबाट अभिवादन व्यक्त गर्दछु ।
तपाई राजनीतिमा सक्रिय हुनुभएको कति भयो ?
राजनीतिमा क्रियाशील भएको त्यस्तै ७ वर्ष जति भयो ।
चलचित्र निर्देशकका रुपमा चिनिनु भएको तपाई राजनीतिमा लाग्नुको कारण ?
राजनीति र चलचित्र क्षेत्रगत हिसाबले फरक भएता पनि उदेश्य एउटै हो । चलचित्र क्षेत्रको उदेश्य पनि परोक्ष रुपमा समाजमा रहेका कुरिती, कुसंस्कार र वेथितिलाई हटाएर समाजलाई सही मार्गमा डोर्याउँने नै हो । राजनीति क्षेत्रले पनि समाजलाई सही मार्गमा डोर्याउँने नै भएकाले काम एउटै भएकाले पनि म राजनीतिमा केही गर्ने सोच बोकेर सक्रिय रुपमा यस क्षेत्रमा लागेको हुँ ।
जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो कार्यकाललाई कसरी मुल्याङकन गर्नु हुन्छ ?
नेपालको सन्दर्भमा एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई जति नै राम्रो काम गरे पनि जस दिने संस्कारको विकास भएको छैन । तर म राजनीतिकर्मी कम, चलचित्रकर्मी बढी भएको ले निष्पक्ष विश्लेषण गरेर भन्छु – यो जनप्रतिनिधिहरुले जति गर्नु पर्ने त्यति गरेको पाईन । वडाध्यक्ष भनेको वडाबासी डे टु डे प्रतक्ष्य सरोकार राख्ने भएकोले वडामा भएका समस्यालाई नयूनिकरण गर्ने, जनताहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, विकासका कुरा, चेतनाका कुरामा ५ वर्षको अवधीमा जुन गतिमा फड्को मार्नुपर्ने त्यस गतिमा प्रगति हुन सकेन । वडाध्यक्षले नगरको सिलिङ वजेट वार्षिक ४० लाख हुन्छ त्यसैमा निर्भर रहेर काम गर्नु भयो । प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग कुनै योजनाको पहल गर्नु भएन । आजको यूगमा वार्षिक ४० लाखले के गर्न सकिन्छ र? तसर्थ पहिलो कार्यकालका प्रतिनिधिले जति काम गर्नुपर्ने त्यतिका गर्नु भएन, चाहनु भएन या सक्नु भएन भन्ने नै लाग्छ मलाई ।
तपाई वडाध्यक्षमा विजयी हुनुभयो भने के गर्ने योजना छ ?
मेरो दृष्टिकोण के छ भने– कुनैपनि घरको घरमूली सक्षम छन् भने त्यो घर राम्ररी चल्छ । हरकुरामा जस्तो आर्थिक, शैक्षिक या व्यवहारिक रुपले त्यो घर राम्ररी चल्छ । त्यसरी नै वडाध्यक्ष पनि वडाको मूली हुन् । तसर्थ वडामा गईसकेपछि बडाबासीको समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्छ । वडाका विकासहरु अगाडी बढाउँछु । वडामा गई सकेपछि पहिलो म वहुवर्षे योजना निर्माण गर्छु । पाँच वर्षमा गर्न सकिने, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने आवश्यकत्ताहरु सम्बोधन गर्ने किसिमका ठूला योजनाहरु तयार गर्छु । अर्को जनताका दैनिक जीवनका आईपर्ने साना–तिना समस्या अथवा स्थानिय सरकारले दिने सेवाहरु अत्यन्तै सहज रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउँछ ।
तपाईलाई यहाँका जनताले किन भोट दिने ?
मैले अघिल्लो कार्यकालमा पनि वडाध्यक्षमा उठे र हारेता पनि यसै क्षेत्रमा रहेर विकास निर्माणका कार्य सम्पन्न गरेको छु । जस्तै २० करोडको खाने पानी योजना, ५ करोडमा कमल खोलामा झोलुङगे पुल लगायत विभिन्न सामुदायिक भवनहरु निमार्ण कार्यका योजनाहरु पूरा गरेको छु । यस पटक हरेक युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने उदेश्य छ । साक्षर युवा, निराक्षर युवा एकल महिला सबैका लागि रोजगार सिर्जना गर्ने योजना मसँग भएकाले त्यो सपना साकार पार्नको लागि मलाई भोट दिएर विजय गराउँन अनुरोध गर्दछु ।
दुर्गा नेम्बाङको योगदानहरु